Wararka Suuqa Ugu Danbeeyay Ee Ku Aadan, Oblak, Konate, Kabak, Vestergaard, Icardi, Johnstone
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWararka Suuqa ugu Danbeeyay ee ku aadan, Oblak, Konate, Kabak, Vestergaard, Icardi, Johnstone
April 10, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Manchester United ayaa weli xiiseyneysa goolhayaha Atletico Madrid Jan Oblak, oo 28 jir ah, xiddiga reer Slovenia ayaana u furan inuu u dhaqaaqo. (90min)
Dhanka kale, tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay in weeraryahanka reer Uruguay Edinson Cavani, 34, uusan wali hubin inuu sii joogi doono kooxda xilli ciyaareedka soo socda. (Manchester Evening News)
Tottenham ayaa xiiseyneysa Feyenoord iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Turkiga Orkun Kokcu, lakiin waxa ay tartan kala kulmayaan kooxda ay isku magaalada yihiin ee Arsenal. (Dailymail)
Liverpool ayaa kula soo saxiixan karta RB Leipzig iyo difaaca 21 jirada France Ibrahima Konate, 21, wax ka yar 40m euros (£ 34.7m) horaantii sanadkan. (Twitter)
Southampton ayaa “sameyn doonta wax walba” si ay kooxda ugu sii heysato daafaca dambeedka dhexe ee reer Denmark Jannik Vestergaard, oo 28 jir ah, sida uu yiri maamulaha Ralph Hasenhuttl iyadoo ay jiraan warar sheegaya in Tottenham ay xiiseyneyso . (Daily Echo)
Daafaca Crystal Palace Patrick van Aanholt, oo 30 jir ah, ayaa loo soo bandhigay qandaraas seddex sano ah oo uu kula joogayo kooxda Galatasaray. Ninka reer Holland ayaa qandaraaskiisu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan. (Sky Sports)
Liverpool ayaa diyaar u ah inay ku darsato dookheeda ah inay iibsato Ozan Kabak ka dib markii ay la dhacday 21 jirkaan daafaca Turkiga ah intii uu amaahda uu la joogay Kooxda. (90min)
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay inuusan wax dhib ah u arkin hadii weeraryahanka reer Argentina Sergio Aguero, oo 32 jir ah, uu ku biiro koox kale oo Premier League ah markii uu ka tagayay Etihad Stadium bishii May. (Thesun)
Weeraryahanka reer Argentina Mauro Icardi, oo 28 jir ah, ayaa isha ku haya inuu ka tago Paris St-Germain xagaagaan. (L’Equipe – Faransiis)
Tottenham ayaa hogaamineysa loolanka loogu jiro saxiixa goolhayaha reer England ee West Brom Sam Johnstone, 28. (ESPN)
Crystal Palace ayaa dooneysa in Eddie Howe ay ka dhigto badalka tababare Roy Hodgson ka dib markii tababarihii hore ee Bournemouth uu badalay maskaxdiisa ku biiritaanka Celtic. (Footballinsider247)
Southampton ayaa isha ku heysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Tottenham iyo England Harry Winks, oo 25 jir ah (Football Insider)
Weeraryahanka kooxda Arsenal ee England U20 ee Folarin Balogun, oo 19 jir ah, ayaa ku dhow inuu saxiixo qandaraas cusub oo afar sano ah oo uu ku sii joogayo kooxda. (Theguardian)
Tababarihii hore ee Chelsea Frank Lampard ayaa sheegay inuu iska diiday “fursado sasabasho ah” si uu ugu soo laabto maamulka laakiin uu aad u doonayo inuu ka bilaabo shaqadiisa koox cusub. (ESPN)